Iyi ndiyo iPhone inoenderana ne "Tsvaga" kudzimwa | IPhone nhau
Iyi ndiyo iPhone inoenderana ne "Tsvaga" kana yadzimwa
Iyo Cupertino kambani yakashoropodzwa zvakanyanya (uye riini isiri bato?) Nekuti mune dzidziso, kune vazhinji, zvitsva zveIOS 15 hazvina kukwana zvachose. Nekudaro, ikozvino yave nguva yekutarisa pane izvo zvinoshandiswa paIOS izvo zviri kuitwa uye izvo zvinomiririra chaicho tekinoroji kumberi.
Ne iOS 15, yako iPhone inogona kuwanikwa kunyangwe yadzimwa uye SIM kadhi yabviswa, zvisinei, haisi yese iPhone ichaenderana. Tichazotarisa tekinoroji iyi iyo Apple yakashandisa pa iPhone nekuuya kweIOS 15 uye kunyanya kana uchizokwanisa kunakidzwa nayo kana kwete.
Izvi zvese zvinoenderana neApple's Ultra Wideband (UWB), iyo tekinoroji iyo inoshandiswa muAirTag uye iyo inotibvumidza kuti tiiwane kunyangwe ichiti haina chero mhando yeasina waya tekinoroji kunze kweiyo yakapusa Bluetooth Low Energy. Iye zvino, yako iPhone ine iOS 15 ichanyanya kushanda seAirTag, ndiko kuti, iwe uchakwanisa kuiwana kunyangwe yakarasikirwa nehukama nenetiweki kana yakadzimwa, zvirinani ichine chikamu chidiki chebhatiri rakasara .
Dambudziko nderekuti chete iPhone 11 uye gare gare zvishandiso zvinotsigirwa. Sezvatakambotaura, nepo paine mamwe matekinoroji ane Ultra Wideband tekinoroji padhuze, zvinokwanisika kuwana iyo iPhone, nekuti nzvimbo mesh network ichagadzirwa. Iyi Apple tekinoroji inoita kuti inakidze nzira yatingawana nayo chengetedzo yakawedzera, mbavha dzinofunga zvakanyanya nezvazvo kana dzichiba iPhone kana Apple ikaramba ichishandisa rudzi urwu rwetekinoroji nekuti bhenefiti yeiyi ichave shoma.
Chinyorwa chemidziyo inoenderana neKutsvaga asi chakadzimwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Iyi ndiyo iPhone inoenderana ne "Tsvaga" kana yadzimwa
Cristian Murro akadaro
Nehurombo ivo vacharamba vachivabira kuti vatengesere zvidimbu, izvo zvinodzivirirwa, zvakare kana vakakuba iwe havabvunze kana iri iPhone uye kana iine nzvimbo yakaitwa jje
Pindura kuna Cristian Murro
Iwe une PS5 here? Sony inokupa mwedzi mitanhatu yemahara yeApple TV +